Ikhaya » izithuba » Iindaba zeMibutho yoKhenketho » Ukhenketho lwaseLaos Rural: Ukwabelana ngamaphandle
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zeChina zokuHamba • IiNdaba zokuHamba ngeeNkcubeko • Iindaba zeNkcubeko yokuHamba • Iindaba zokuhamba kwezemfundo • Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe • Iindaba zokuhamba eLaos • Iindaba ezijongene noKhenketho • Iindaba zoKhenketho • Iindaba zeMibutho yoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziShukumayo
Ukhenketho lwaseLaos Rural: Ukwabelana ngamaphandle
Inzala kukhenketho lwasemaphandleni eAsia Pacific luye lwasasazeka kumashumi eminyaka akutshanje, kufana nokubuyela kwilizwe okwenziwe ngo-19thkwinkulungwane ye-Victorian eNgilani, nangezizathu ezifanayo. Ukwanda kwabantu basezidolophini zaseAsia bafuna ukusinda kubomi babo basezidolophini abagcwele uxinzelelo, kodwa behlala beqhelekile, kwaye baya ngokuya besiya ekuzonwabiseni nasekuphumleni kwiiholide ezisemaphandleni.
Nangona kunjalo, iAsia Pacific ijongene nemeko eyahluke kakhulu namhlanje kunoThomas Cook kwii-1850s. Ukuphonononga lo mbono ukhulayo ngokwendalo, iSixeko saseHuzhou, China, sisebenzisana noMbutho woKhenketho wePacific Asia (PATA) kunye noMbutho wezoKhenketho weHlabathi (i-UNWTO) ukusingatha iNkomfa yesiBini yaMazwe ngaMazwe yezoKhenketho emaPhandleni ukusukela ngomhla we-16-18 kweyeKhala ngowama-2017, eAnji County, eLaos.
Ngexesha lomsitho wokuvula, iGosa eliyiNtloko lokuSebenza le-PATA u-Dale Lawrence unikezele ngeBhaso leSiseko soKhenketho lwaMazwe ngaMazwe lwaseMaphandleni kuMantyi wase-Anji County u-Chen Yonghua. Indawo yaseHuzhou kunye neAnji yaziwa ngokuba ziinduli ezinamahlathi, iindidi zoqalo, iti emhlophe, imilambo, amadama, iipandas, kunye neecalligraphy.
Usihlalo wePATA Foundation uPeter Semone emva koko wasungula upapasho lwe-UNWTO, "Ingxelo ngoPhuhliso lwaMazwe ngaPhandle loKhenketho emaPhandleni: Imbono yeAsia Pacific". Uxwebhu olunamaphepha angama-200 lubonisa ngezifundo ezikwindawo ezili-14 zasemaphandleni e-Asia Pacific, kubandakanya neHuzhou.
Umnumzana Semone, umbhali kunye nomhleli oyintloko wale ngxelo, uthe, “Njengokuba u-2017 ingunyaka wamazwe ngamazwe woKhenketho oluZinzileyo loPhuhliso, sifuna olu papasho lujolise kwezona ndlela zingcono kunye nezicwangciso eziyimpumelelo kuphuhliso lwezokhenketho emaphandleni e-Asia Pacific.”
UShen Mingqua, Unobhala weKomiti yezoKhenketho yaseAnji, emva koko wamkela abathunywa abangama-300 nangaphezulu abavela kumazwe angaphezu kwali-15 "kwiKhaya laseAsia Pacific Rural Tourism". UMnu Mingqua ubonakalise impumelelo ka-Anji kubandakanya indawo yokuqala yezokhenketho esemaphandleni eqinisekisiweyo kunye nokuphela komamkeli we-UN Habitat Award.
“Ubuchule bokuyila bubalulekile kwimpumelelo yethu… Sifana nomzekelo wezimvo zokhenketho lwasemaphandleni,” utshilo uMnu Mingqua, eqaphela ukuba ngoku uAnji uzama ukurhwebesha isihlwele seMICE. "Sifuna amashishini atyelele apha ukuba iintlanganiso zihlale kwaye zibone ukuba zivelaphi kwaye zenziwe njani." Ikomiti yezokhenketho ikwajolise kwiintsapho ngamava ezolimo.
Ugqirha Ong Hong Peng uxoxe ngeemveliso zokhenketho lwasemaphandleni kwaye wabonisa ukuba izinto ezinokubakho ziwela onke amacandelo. "Uluhlu lweemveliso zahluka kakhulu kwaye zinokubandakanya phantse yonke into," utshilo owayenguNobhala Jikelele weSebe lezoKhenketho neNkcubeko laseMalaysia. Uye wazisa "ngendlu yezokhenketho yasemaphandleni enamacandelo amathandathu" enamagumbi afikelelekayo kubunewunewu, ubumnandi bendalo, iziqwengana zeminyhadala, iminyhadala kunye neminyhadala, i-MICE, kunye nenkcubeko kunye nelifa lemveli.
UGqr Peng emva koko wazisa indawo yokuhlala kunye nendlela yokuphila kumxube. "Ukuhlala ekhaya kubalulekile kukhenketho lwasemaphandleni, kodwa kufuneka lube namandla… lwenze izinto ezintsha… ukongeza ixabiso… Inokuba kuzo zonke iindawo zokuhlala, njengoko abanye abantu befuna ukuba bucala." Ucebise "ngomxube wokuhlala kwilali kunye nekhaya".
Usekela-Mongameli we-Airbnb wase-China u-Li Li ungenelele kwenye indawo yokuhlala abakhenkethi basemaphandleni. “I-Airbnb 'yeyakho konke' kukhenketho kuqoqosho lwezabelo. Ulwabiwo lungcono kuneehotele, kwaye ababuki zindwendwe abaninzi banokuthatha inxaxheba, utshilo, wongeza, "Ii-Airbnb-ers zihlala kabini kunalezo zihlala kwindawo yesiqhelo. Batyekele ekuchitheni imali eninzi, kwaye bafuna indawo yokuhlala elungileyo. ” UNksk Li uqaphele ukuba umsebenzi ovela kwi-Airbnb uya kubafazi balapha, abantu abancinci, kunye nabantu abadala.
I-China's Naked Retreats izisa ubunewunewu kwindalo kunye namava asemaphandleni angalibalekiyo anefuthe elihle kuluntu. "IShanghai igcwele kwaye inamagqabi, kwaye abantu bafuna ukuya eholideyini ngaphandle kwesixeko," utshilo uTolga Unan, umphathi jikelele wecandelo leholide. “Siqesha kwaye sisebenza nabantu balapha kwaye sifunde kubo nangendlela abaphila ngayo. Injongo yethu kukugcina nokuncedisa, kwaye singatshintshi. ”
INkulumbuso yeNkomfa kunye noMgcini weCCTV uBai Yansong ujonge ukuba ukhenketho lwasemaphandleni alukho malunga neendawo ezisemaphandleni kuphela. "Iindawo zasezidolophini ziyatshintsha ziye kufana namaphandle, ngokwamkela okusingqongileyo okuluhlaza… Ayisiyeyasedolophini nje kuphela ukuya emaphandleni… sisitrato esinamacala amabini esidibanisa nesabelo."
Inkomfa yatshintshela kwingxoxo yephaneli "Ukwabelana ngeeNdawo ezisemaphandleni", eyayiqhuba ukusuka kwimiboniso ephambili. UNobhala oLawulayo we-UNWTO weAsia Pacific, uXu Jing, uqaphele ukuba lo mmandla uyinto efika emva kwexesha kukhenketho lwasemaphandleni, kwaye kufuneka ulungelelanise imodeli yakudala ukuze ihlangabezane nemozulu entsha yezoqoqosho. Amava kufuneka abe yinyani. Le nto isenokuba yeyasekuhlaleni, kodwa elona khaya lokwenene sisimo sokwenene. ”
Umnumzana Jing wongeze wathi, “Abatyeleli bafuna ukwenza izinto ezenziwa ngabantu balapha, kwaye bafuna ukudibanisa indlela abahlala ngayo ezidolophini kunye nemimandla yasemaphandleni… Ubomi basemaphandleni liphupha kubantu basezidolophini. Balibele ukuba kunjani… ukumamela izandi zendalo nokubona iinkwenkwezi. ” Uye waphawula ukuba abantu basemaphandleni, abafudukela esixekweni, bahlala betyelela iidolophu zabo kwaye bade bathathe umhlala phantsi apho.
Ugqirha Liu Feng, uMcebisi oyiNtloko weBeijing Davost Group, uqhubeke wathi, "Abahlali beSixeko bayabamonela abo batyelela okanye babuyela ezilalini." Ubuye wafunda umbono ka Mnu Yansong "wophuhliso olungagungqiyo", ebona ukukhula kwiidolophu eziluhlobo lwasemaphandleni. "Indawo yasemaphandleni ayinangqondo, kwaye abantu bafuna ukuvuselela ubomi bendabuko," utshilo. Badibanisa ukhenketho lwasemaphandleni nobomi basezidolophini. Inobuqu ngakumbi, iyafana nabahlali, kwaye ilula. ”
Ingxoxo ibuyele ezilalini, njengoko usekela sihlalo wePATA uChris Bottrill wazisa intsebenziswano xa kuthelekiswa nokhuphiswano okanye "intsebenziswano". "Ukuba nazo zombini izinto kuyayiphucula imveliso," utshilo, esalatha kukunyaniseka kwamava kunye nokwahlulahlula. "Kufuneka sabelane ngeendlela kunye noko sikufundayo ngaphakathi naphakathi kwamazwe." Malunga nemiceli mngeni ejongene nophuhliso lwezokhenketho emaphandleni, uMnu Bottrill uthe xa usebenza noluntu lwasemaphandleni, udinga ixesha, intembeko, kunye nentlonipho… ayisiyiyo 'i-UNESCO' kuphela etsala iindwendwe. ”
Ilungu leKomiti yeNgcali ye-UNWTO uMadam Xu Fan ucebise ukuba "ilifa lemveli" libe nokuthinta ngakumbi ubuqu, kwaye bajonge kwisizukulwana esilandelayo ukwenza imibono emitsha emitsha. Malunga nenqanaba lophuhliso, uthe, “ukhenketho lwasemaphandleni lufana nokutyala nokuvuna izityalo. Ifuna ukhathalelo oluqhubekayo, kwaye kugxilwe kubudlelwane babalimi nabakhenkethi hayi imali yabalimi kuphela. Ukhenketho emaphandleni lumalunga nendlela yokuphila yasemaphandleni hayi izinto zalo. ”
Umphandi oPhezulu we-UNWTO u-Omar Nawaz ukwalumkisile ngokuchasene nokukhula ngokukhawuleza, njengoko kuchaphazela umgangatho. Ukucwangcisa yinto enye, kodwa ukuphunyezwa kuthatha ixesha. Udinga ingcinga yexesha elide… ubudlelwane phakathi kwamaphandle nokhenketho ngokubanzi, ”utshilo, kwaye wacebisa ukuba ufunde kwiimpazamo zabanye. “Mamela ufunde. Lungisa kwimfuno entsha. Gxila kuphuhliso olubandakanyayo, kwaye uphuhlise ukusuka kancinci ukuya ngokukhawuleza. Umceli mngeni kukhenketho lwasemaphandleni kukuphuhlisa ngokukhawuleza okukhulu.
Umnumzana Semone uthelekise uphuhliso lwezokhenketho emaphandleni eYurophu kunye ne Asia Pacific. “Ukhenketho lwasemaphandleni lwaseYurophu luthe gqolo ukukhula ngaphezulu kweminyaka eli-100, ngexesha lokukhula okuphakathi kwabantu abakumgangatho ophakathi. I-Asia Pacific ibisemgceni isithuba seminyaka engama-20 ukuya kwengama-30, kodwa oku kunika ithuba lephulo elitsha laseAsia, ”utshilo uMnu Semone. "Funda izifundo ezivela eYurophu, kodwa wenze uphuhliso lube lolwe-Asiya kuphela."
Umnumzana Semone uqaphele inkolelo yakhe yokuba abantu base Asiya bayathandabuza ukwenza izinto ezintsha nangona kukho abantu abaninzi aboyilayo. “Abantu baseAsia bathanda ukukopa kunokuzama into eyahlukileyo. Bafuna imodeli yophuhliso lwase-Asia. Rhoqo, amazwe aseAsia abanjelwa kwinqanaba leekopi, njengeLaos. Masenze into eyahlukileyo. ”
Umnumzana Semone uphinde waxoxa "ngeNgxelo yoPhuhliso lwaMazwe ngaMazwe loPhuhliso lwezoKhenketho: Ingcamango yeAsia Pacific". "Le ngxelo ijolise ekuboniseni amandla okhenketho lwasemaphandleni olunokunceda abantu ukuba babaleke indlala, baphucule iindlela zabo zokuphila, kwaye bacothe ukufudukela ezidolophini."
Ingxelo ichaza “ukhenketho lwasemaphandleni” “njengento eyahlukileyo kwezokhenketho oluzinzileyo nolunoxanduva.” Iikhrayitheriya zibandakanya indawo yasemaphandleni kunye nemisebenzi ehlala ezilalini kwisikali, ngokwesiko ngokwesimilo, ukukhula kancinci kwaye ngokwasemzimbeni, kwaye kunxulunyaniswa namashishini akhasayo kunye neentsapho zasekuhlaleni.
Ukhenketho lwasemaphandleni lunokubandakanya amacandelo okhenketho afana ne-ecotourism, ukhenketho lwezolimo, kunye nokhenketho lwe-geo. "Ukhenketho lwasemaphandleni aluyiyo icandelo lezentengiso elilula nelichazayo," utshilo uMnu Semone.
Ingxelo nganye yeengxelo ezili-14 zomxholo zinomxholo owahlukileyo, njengoko iimeko zeendawo zabo ziyahluka. Nangona kunjalo, konke kuhlalutywa komgaqo-nkqubo kunye nokucwangciswa, uphuhliso lweemveliso, ukuthengisa kunye nokukhuthaza, kunye nefuthe kwezentlalo nezoqoqosho. Ingxoxo yokuvala iphanda imiceli mngeni ephambili, amathuba, kunye nezifundo ezifundiweyo.
"Ezi zifundo zibonisa ukuba ngeemeko ezifanelekileyo kunye neemeko, ukhenketho lwasemaphandleni lunokudala imithombo emitsha yengeniso kuluntu nakumakhaya," utshilo uMnu Semone.
Ugxininise imfuneko yohlobo olutsha lwe-PPP- abantu-abucala-ubudlelwane phakathi kwabucala-apho bonke abachaphazelekayo bemelwe. "Le yingcinga entsha ecela umngeni kwimeko yokuba nomona kukhuphiswano ngenjongo yokufumana inzuzo ngokuhlangeneyo."
Ingxelo iqukumbela ukuba iindawo zokhenketho lwasemaphandleni kufuneka zenze izicwangciso zeshishini ezinenkathalo nezinzileyo kunye neendlela zokuthengisa ezisebenzayo ezenza iimeko zazo ezithile. Umnumzana Semone ushwankathele, "Kukho iindlela ezahlukeneyo zokufikelela kwinjongo enye."
Namhlanje, uya kuba nzima ukufumana iphakheji yokhenketho lwasemaphandleni kwiwebhusayithi kaThomas Cook, kodwa iindwendwe ezininzi zangaphandle zifuna iholide elinamava kwiindawo ezikwinqanaba laseAsia, kwaye ukhenketho lwasemaphandleni lubabonelela ngenye indlela yokufumana indawo enoxanduva neyinyani.